Ducada Lagu Kala Saaro Laba Qof? [Kala taggii u dambeeyay]
Salaadda in la kala saaro laba qof a San Alejo Rapido wuxuu quseeyaa xaaladahaas oo qoyskeena, degenaanshaheena shucuur iyo shucuur ama fayo qabka caruurteena ama rafiiqayaga la waxyeeleeyay.
Tusaale ahaan, kiis qaas ah oo lammaanaheena lagu raadinayo waxqabadyo aan aaminsanahay inaysan ka faa'iideysan doonin, laakiin taa bedelkeeda ay dhaawaceyso, ka dib jumladani waa ansax.
Xaaladaha sida ugu badan loo isticmaalo, waa in laga soocaa lammaanaheena hore kan lammaanaha ah ee hada doonaya inuu awoodo inuu soo cesho xiriirkii aan wada laheyn ama ka hor istaago in lammaanaha noo dhaafo qof kale.
1 Salaadu miyay ku kala goyn labada qof soonka marwalba way shaqeeysaa?
1.1 Salaadda San Alejo si loo kala saaro laba qof oo runtii ah
1.2 Salaadda in la kala jeclaado runtii
1.3 U soo ducee labada qof inay is dagaallamaan oo is neceb
1.4 Salaada Qaybinta Ugu Dambeysa
2 Ma u tukan karaa salaadda in laba qof loo kala saaro cidna?
Salaadu miyay ku kala goyn labada qof soonka marwalba way shaqeeysaa?
Jacaylku waa shay aad u dhib badan.
Haddii jacaylka u dhexeeya labadan qof uusan dhab ahayn, salaadda way shaqeyn doontaa.
Jacayl kasta oo daciif ah, oo aan dareemayn ama aan xamaasad lahayn ayaa si fudud loogu kala gooyaa kuwan salaadda.
Waxay ku dhammaadaan fikrado qaldan, fikradaha jacaylka iyo dhammaan xiriirada ka dhexeeya labada qof.
Kaliya lamaanayaasha jacaylka la saadaaliyay ayaa badbaadin doona iyaga.
Haddii kale, waxaad awood u yeelan doontaa inaad kala soocdaan kuwa jecel, saaxiibbada isla markaana guursaday maalmo kooban oo salaadda ah.
Salaadda San Alejo si loo kala saaro laba qof oo runtii ah
Adiga oo ah kan goonida u gooni ah.
Wax kasta oo uur leh oo ku xeeran doorashada Rabbiga, waxaan kaa codsanayaa inaad ka laabato (Qofka hore ayaa la magacaabay) laga bilaabo (Magaca soo socda ayaa la yidhi) La noqo, St. Alejo, illaa (Magaca waa lagu soo celiyay).
Isaga oo maraya noloshiisa iyo noloshiisaba si uusan noo rumeysneyn burbur intaas ka badan. Waxaan kaa codsanayaa, San Alejo, in sidoo kale aan ku maareeyo nolosha.
Sidoo kale bax.
Taasi waa inaysan ku wada shaqeyn karin, ama aysan ku maareyn karin inay wada joogaan, Miis ama miis yar, ama kursi lagu nasto, Ama sagxad lagu tacaalo
Taas oo aan lagu dhejin karin aaminaadda. San Alejo, gunaanad ka dhig.
San Alejo oo sifiican loo caleemo saarey, sida barakaysan ee barakeysan waxaan kaa codsanayaa inaad siiso codsigayga sida ugu dhaqsaha badan, iyo lammaanaheyga inuu hadda ku laabto si uu ula yimaado qoyskiisa.
Waxaan kuugu mahadnaqayaa inaad i maqashay, oo tusaale u ah San Alejo, oo waxaan ku siinayaa eraygayga si aan u faafiyo ducadaada haddii aad ii oggolaato inaan dib u guursado qoyskeenna.
Nafta aan kaa codsado inaad ku kala tagto Ha u soo noqonnin noloshayda Aamiin.
Waxaa jira kiisas aan si fudud u arki karin laba qof oo wadajira, sabab kasta oo aan rabno inay kala tagaan, si taas loo gaaro oo si nabad ah oo wax ku ool ah aan looga fiicneyn duco San Alejo.
Jumladdan waa inaad lahaataa magaca labada qof ee aan rabno in aan kala tagno maadaama ay tahay inaad tiraahdid bartamaha jumladda.
Waa duco aad u khaas ah oo la codsaday si aysan labada qof ee arintu khusayso u ogolaan naftooda, ma jecla inay waqti la wadaagaan qofka kale, si jiritaanka lammaanaha ay u kala carqaladeeyaan, sidaa darteed iyagu ayan dooneynin inay mar kale la kulmaan iyo min daqiiqad ilaa kan ku xigga, naftooda way is nacaan ilaa heer ay gaaraan kala tag.
Tukashadani waa mid awood badan leh.Sidaa darteed, looma jeedin in la kala maqnaado lamaanaha in muddo ah, laakiin waa in kala-taggu uu si rasmi ah u yahay.
Salaadda in la kala jeclaado runtii
Oh, Santa Muerte Waxaan u imid inaan kuu duceeyo inaad i caawiso, nolosha ayaan ka xumahay, cimrigeygii iigu fiicnaa waxaan siiyay nin aan jeclahay oo iga go'ay oo aan naag kale la imaado si uu u ciqaabayo naagtaas dhibaysa. Wuxuu doonayaa inuu guurkayga ka baabi'iyo (magaca qofkaas) si uu weligiis iigu soo noqdo.
Santa Muerte, samee (magaca qofkaas) wuxuu bilaabay inuu necbaado isaga oo aan kalsooni ku qabin, garawso inay isaga u adeegsanayaan, waxa keliya oo uu doonayo waa lacagtiisi iyo madadaalo isaga la jira dano, waxaan kaa codsanayaa inaad kala duwanaato gacaliyahayga wax walba waxa iga fogaada ilmada igu daadisa qof kale awgood, noqo dhib badan iyada.
Oh, Gabadha cad waxay u isticmaashaa awoodahaaga inaad ka soo saarto naagta kale ciyaarta, Santa Muerte waxaan kaa codsanayaa inaad keento (magaca qofkaas) waqtigan xaadirka ah hortayda igu soo celi anigoo jilicsan sida wan yar oo kale, iska ilow magaca naag kale ayaa cagtayda iga dhigaysa macaan oo cafis weydiista.
Oh, Santa Muerte samee (magaca qofkaas) ha iska caabin rabitaanadayda maskaxdaada ku dhig fikirkaaga mar labaad iga feker mar kale anigoo dambi dhaaf weydiisanaya, waan ka xumahay iga codsi jacayl inaan dib u heli karno mar labaad sidii hore oo kale aniga oo kaligey igaga tagin Santa Muerte .
Kuwa jecel Waxaa lagu yaqaan inay yihiin qof seddexaad oo ku dhaca xiriirka xasiloon waana dhibaato aad u xun oo ay tahay in si caqli leh loola macaamilo.
Mid ka mid ah siyaabahaas ayaa ah in la sameeyo duco gaar ah oo ujeeddada laga leeyahay lagu gaari karo iyada oo aan dhicin isku dhac.
Ducadan loo kala fogeeyo laba qof (jacayl) ayaa ku guuleysatay cibaadooyin fara badan oo ay ugu mahadcelisay waxtarnimadeeda
Markaad fikradaha cad kahesho, sii wad salaadda, ayaa la samayn karaa wakhti kasta, meel kastoo aad joogtid, waxa lagu taliyaa waa in lagu sameeyaa si daacadnimo weyn leh iyo, sida kiisaska salaadda oo dhan, aaminaad weyn.
U soo ducee labada qof inay is dagaallamaan oo is neceb
Saint Cyprian, adiga oo ah kuwa ugu awoodda badan dhammaan kuwa awoodda leh, fadlan waxaan u baahanahay caawimaadaada, jacaylkaaga, waxaan labadeenaba u sameynay inaan ku wada noolaano midba midka kale, waxaan kaa codsanayaa inaad fadlan ka guurto 1 ilaa 2, waxaan u baahanahay awoodahaaga loo isticmaalo in lagu kala saaro labadan qof.
Ma dooneysid inaad wax aragtaan, si wanaagsan u joog, midba midka kale. Waan ogahay inaad awood u leedahay inaad xakameyso jaceylka oo aad ogaato inay jiraan dad aan u dhalan inay ku noolaadaan sida midba midka kale uu leeyahay, hubso inay tahay inaanay wada joogin, waan ku dhaaranayaa.
Oh xoog badan Saint Cyprian, waxaad tahay midka xoogga badan ee xoogga leh, waxaan kaa codsanayaa inaad u isticmaasho xooggaaga, si ay dadkaani u kala baxaan, uma sii socon karaan, mar dambe uma silcaan karaan, Waan ogahay inay u baahan yihiin in la kala tago, lammaanahani ma ahan tusaale farxad.
Waxaan u duceeyaa tukashadan in la kala saaro dadkaas aan faraxsanayn, waan ogahay inuu iga farxin karo, sidoo kale waan ogahay in ducadan ay si sax ah u shaqeyn doonto, sidaa ha ahaato.
Kama nixin karno nacaybka, waxaan nahay dad nabdoon oo aamminsan wadahadalka marwalba oo ah qaab lagu xalliyo dhibaatooyinka iyadoo aan loo eegeyn cidda ama sababta ay yihiin.
Hadda, dareenkan, jumladahan waxaa lagu sameeyey ulajeedo Ku abuuro cadowga xaaladaha kuwa tamarta xun ay ku qulqulaan Wasakhaynta qof wanaagsan.
Waxaan nahay tamar waana sababtaas awgeed waa inaan had iyo jeer daryeelaa kuwa nagu xeeran oo xitaa aan wasaqeysanaa jawiga gurigeenna.
Haddii salaaddaan laba qof ay u dagaallamaan oo ay is nacegaan waxaan ku sameyneynaa xubin ka mid ah qoyska, waa mid aad ufiican, maadaama tamar wanaagsan ay guriga ku qaadaneyso xoog badan oo soo jiidata jawaabta salaadda.
Salaada Qaybinta Ugu Dambeysa
Waxaan dadka u soo bandhigaa ereyadan ...
Taasi hadda waxay maskaxdayda ku wareegeen, sidaa darteed, markii aan dhammeeyo mooyee, waxaa jira cadho wada-jir ah oo aynaan dib u wada noolaan karin.
Halganka ha noqdo qayb ka mid ah noloshooda hadda laga bilaabo, iyo Marka saacadda go’aamadu timaado, ka sooc oo waligaa ha isu imaan.
In wixii ay abuuraan saaxiibtinimo maanta ay tahay wax aan jirin oo waa cirfiid jahwareer ah iyo in jidkoodu u socdo jihada ka soo horjeedda mustaqbalka si ayan mar dambe ula kulmin.
Aan u soo dego midkan ama ka sii gudba naftooda waxaanan ka helaa waxaan ku weydiisto rumaysadka.
Xaaladdan oo kale ma weydiisanayno cadow ama nasasho yar.
Weedhan gaarka ah waxaan ubaahanahay inaan gaarno a kala goan qeexan.
Waxaa lagu dabaqi karaa xaalado badan labadaba xiriirka jaceylka iyo kan saaxibtinimada saafi ah.
Waxaa jira dad iyagu inkasta oo ay bixiyaan muuqaalka ah in ay leeyihiin ulajeeddooyin wanaagsan had iyo goorba waxay la yimaadaan xoog badan oo tabar daran ama ujeeddo qarsoon oo aan dhammaantood ku fiicnayn.
Tukashadan salaadda waxay tukanaysaa jidkayaga kaliya ee wax ku oolka ah.
Ma u tukan karaa salaadda in laba qof loo kala saaro cidna?
Waad u duceyn kartaa qofkastoo aan xad lahayn.
Laakiin isticmaal salaadda oo keliya markii ay daruuri tahay. Ha isku dayin inaad kala go'do lammaanaha iyada oo aan wax sabab ah la sameyn.
Caadooyinkan waa kuwo aad u xoog badan oo looma adeegsan karo ujeedo kasta.
Keliya u isticmaal salaadda si aad ugu kala saarto laba qof si qeexan iyo kala go 'deg-deg ah oo qeexan markay jiraan baahiyo dhab ah.